सबै हिसाबले पहिलो बैंक हुनेछौँ : चन्द्रप्रसाद ढकाल - Aathikbazarnews.com सबै हिसाबले पहिलो बैंक हुनेछौँ : चन्द्रप्रसाद ढकाल -
assignment writing service help creative writing describe disappointment binghamton creative writing correct order in writing the research paper old dominion mfa creative writing pictures to inspire creative writing ks1 nonfiction creative writing course creative writing professor jobs california essay creative writing prompts dissertation writing services south africa differential equations homework help creative writing characterization essay about importance of doing homework nursing essay writing service uk creative writing course sheffield masters in creative writing paris resume writing service dallas geography essay writing service how does critical thinking help you academically doing business plan good effects of doing homework salt writing custom grains creative writing task year6doing your homework meme university of edinburgh creative writing staff who to write thesis statement creative writing key points thesis statement on birth order my cat creative writing sites homework help
चन्द्रप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष, ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड
ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकबीच पाँच महिनअघि सुरु भएको मर्जर प्रक्रिया सकिएको छ । मर्जरका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर २० मंसिरदेखि एकीकृत कारोबार गर्दै छन् । दुई ठूला वाणिज्य बैंकहरूबीच मर्जरमा सहमति कसरी जुट्यो ?
ग्लोबल आइएमई बैंकले सुरुदेखि नै सरकार र राष्ट्र बैंकले लिने नीति नियमलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । नियामकको नीति कार्यान्वयनमा सुरुदेखि नै सघाउँदै आएको छ । सुरुमा ‘क्रस होल्डिङ’ गर्नुहुँदैन भन्ने राष्ट्र बैंकले नीति लियो, हामीले त्यसको पालना गर्दै ग्लोबल बैंक र आइएमई फाइनान्सलाई मर्जरमा लग्यौँ । त्यसपछि पुँजी वृद्धि गरेर ८ अर्ब पुर्‍याउने नीति राष्ट्र बैंकले लियो, त्यसलाई पनि हामीले इमानदार भएर पालना गर्‍यौँ । अरू बैंक वित्तीय संस्थाले हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि गरे । हामीले भने राष्ट्र बैंकको नीतिको मर्मअनुसार नै मर्जर र प्राप्तिबाट पुँजी वृद्धि गर्‍यौँ । वास्तवमा राष्ट्र बैंकको चाहना पनि त्यही थियो ।
चालू आवको बजेटले ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको मर्जर (बिग मर्जर) लाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लियो । नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने भनेर बिग मर्जरको नीति लियो र त्यसका लागि प्रोत्साहनको घोषणा गर्‍यो । मौद्रिक नीतिले पनि त्यसलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्‍यो । त्यसपछि हामीले सरकार र राष्ट्र बैंकको ‘बिग मर्जर’को नीतिलाई पनि आत्मसात् गर्दै त्यसको पालना गर्ने सोच बनायौँ । हामीसँग फाइनान्स र विकास बैंकसमेत मर्जर प्राप्ति गरेको अनुभव पनि थियो । मर्जर गर्दाको फाइदा–घाटा, चुनौती र समस्याका बारेमा हामी अवगतै थियौँ । बिग मर्जरमा जाँदा पनि खासै चुनौती देखेनौँ । अनुभव पनि भएको र सरकारले पनि नीति लिएका कारण हामी बिग मर्जरमा जाने निर्णयमा पुग्यौँ । र, मर्जरको कुरालाई अघि बढायौँ । हामीले केही बैंकसँग मर्जरका लागि कुरा गर्‍यौँ । त्यसमा जनता बैंकसँग कुरा मिल्यो र मर्जरमा गयौँ । वास्तवमा भन्ने हो भने जनता बैंकसँग दुईपटकको बैठकमै मर्जरको समझदारी भएको हो ।
मर्जरका लागि थुप्रै विषयमा सहमति जुट्नुपर्छ । दुई बैंकबीच बैंकको नामदेखि सिइओ र सञ्चालकको बाँडफाँडमा कसरी सहमति जुट्यो ?
मर्जरका लागि सबैभन्दा पहिला दुई–तीनवटा सर्त छन्– मर्जर गर्ने कि नगर्ने ? कुन बैंकसँग गर्ने ? अनि कसरी गर्ने ? । यी तीन कुरा स्पष्ट भएपछि मात्रै अब बाँकी मूल्यांकन तथा बाँडफाँड हुन्छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंक दुवैले मर्जरमा जाने निर्णय गरेर पार्टनर खोजिरहेका थिए । आपसमा मर्जरमा जने कुरामा हामी सहमझदारीमा आयौँ । मर्जरका लागि मुख्य पाँच विषय थिए, मर्जरपछिको बैंकको नाम, सञ्चालकको संख्या, सिइओ, अध्यक्ष र स्वाप रेसियो । यी सबै कुरामा सहमति जुट्यो । बैंकको नाम ग्लोबल आइएमई राख्न जनता बैंकको टिम तयार देखियो ।
सञ्चालक सात जना हुने त्यसमा दुईजना जनताबाट हुने भयो । सिइओ जनताबाट राखिने भइयो । अध्यक्षका लागि उहाँहरूले नै मलाई प्रस्ताव गर्नुभयो । अनि स्वाप रेसियो जनताको १ सयबराबर ग्लोबल आइएमईको ८५ हुने भयो । दुईवटा मिटिङमै यी पाँच विषयमा सहमति जुट्यो । दुवै पक्षले ‘विन विन’को महसुस गर्‍यौँ । डिडिए गर्दा १० प्रतिशतभन्दा धेरै तलमाथि भयो भने स्वाप रेसियोमा हेरफेर गर्ने कुरा भएको थियो । तर, त्यसो भएन । जुन दिन हामीले सहमति गर्‍यौँ, त्यही दिन दुवै बैंको बोर्ड बैठक बस्यो, व्यवस्थापनलाई पनि डाकियो र त्यही दिन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरियो । हामी निर्णय लिने सोचका साथ दुवै पक्ष बसेका थियौँ त्यही भएर मर्जरको समझदारी भयो । यसमा केन्द्रीय बैंक र सरकारको पनि उत्तिकै सहयोग मिल्यो । यसलाई उहाँहरूले पनि ‘मोडल’कै रूपमा हेर्नुभएको थियो ।
हामीले एकताको भावना लिएर काम गर्न सक्यौँ भने छिट्टै सबै हिसाबले एक नम्बरको बैंक बन्न सक्छौँ । अहिले धेरै पुँजी, धेरै नेटवर्क र धेरै निक्षेप तथा पुँजी भएको बैंक बन्दै छौँ, अब धेरै नाफा कमाउने र धेरै प्रतिफल दिने बैंक पनि बन्नुपर्छ ।
दुई ठूला बैंक मर्ज भएर एक भएको छ । अब मर्जरपछि शाखा समायोजन, सफ्टवेयर तथा काम गर्ने संस्कारलाई एक बनाउने र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई कत्तिको चुनौतीपूर्ण ठान्नुभएको छ ?
यसअघि पनि हामी (आइएमई) ले वाणिज्य बैंकलाई मर्ज गराएका थियौँ, ठूला विकास बैंकसँग पनि मर्जरमा गयौँ । यसको अर्थ के हो भने हामीसँग सबैखाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्ज प्राप्ति गरेको अनुभव छ । जहाँ हामी सफल पनि देखिएका छौँ । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचको मर्जरपछि ‘सिनर्जी’ नदेखिएको उदाहरण पनि छन्, मर्जरपछि व्यवस्थापनमा समस्या आएको पनि देखिएको छ । तर, हामीले त्यस्तो अवस्था भोग्नुपरेन । र, पर्ने पनि छैनजस्तो लाग्छ ।
थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको मर्जर र प्राप्तबाट बनेको ग्लोबल आइएमई बैंकमा कर्मचारी व्यवस्थापन, काम गर्ने संस्कारलगायतमा कुनै समस्या छैन, त्यस्ता ‘इस्यु’ जिरो नै छजस्तो लाग्छ । मर्जरपछिको परिणाम तथा प्रतिफल पनि उत्साहप्रद नै छ । यत्रो पुँजीमा हामीले जुन लेबलको सेयर होल्डरलाई लाभांश दियौँ, त्यो उत्साहप्रद नै छ । अरू सबै ठीकै छ, प्रतिफलचाहिँ राम्रो दिएको छैन भन्ने अवस्था पनि हाम्रोमा छैन । सबै ठीक छ र प्रतिफल पनि ठीक छ । अबको मर्जरपछि पनि कुनै समस्या आउँदैन, अझ राम्रो हुन्छजस्तो लाग्छ । यसअघिका मर्जरबाट हामीले अनुभव सँगालेका छौँ, धेरै पाठ सिकेका छौँ, यसर्थ मर्जरपछि ग्लोबल आइएमई बैंकमा अझ ‘सिनर्जी’ देखिनेछ ।
अब एकीकृत कारोबार गरेसँगै ग्लोबल आइएमई बैंक देशकै सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्दै छ, पुँजी र नेटवर्कका हिसाबले पनि । मर्जरपछि बनेको ठूलो बैंकमा अब व्यावसायिक हिसाबले कस्तो सिनर्जी ल्याउने अनुमान गर्नुभएको छ ?
अहिले केही बैंकहरूले सीमित शाखा र सीमित कर्मचारी भएका केही बैंकले ४–५ अर्ब खुद नाफा कमाएको अवस्था पनि छ । धेरै कर्मचारी र शाखा भएका बैंकले पनि सोहीबराबरको नाफा कमाएका छन् । हामीले अब गर्नुपर्ने र गर्न खोजेका दुईवटा कुरा छन्, एउटाचाहिँ लागत घटाउने र अर्कोचाहिँ कर्मचारीको आउटपुट बढाउनुपर्नेछ ।
हामीसँग ३ हजार २ सय कर्मचारी छन् । देशैभर शाखा सञ्जाल छ । अब प्रतिकर्मचारी आम्दानीलाई बढाउन सक्यौँ भने हामी धेरै माथि जान सक्छौँ भन्ने लाग्छ । मलाई लाग्छ, आउने दिनमा हामीले हाम्रा कर्मचारी साथीहरूको नम्बर र नेटवर्कको सामथ्र्यबाट आउटपुट निकाल्न सक्यौँ भने तुलनात्मक रूपमा धेरै राम्रो गर्न सक्छौँ, ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ ।
ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकका व्यावसायिक क्षेत्र र नेटवर्क फरक–फरक थिए, व्यवसाय गर्ने तौरतरिका र प्राथमिकता पनि फरक थियो होला । अब मर्जरपछिको ग्लोबल आइएमई बैंकको व्यावसायिक नीति तथा प्राथमिकता कस्तो हुन्छ ?
अहिले ग्लोबल आइएमई जुन नीति र गतिका साथ अघि बढेको छ, मर्जरपछिको ग्लोबल आइएमई पनि त्यसरी नै अघि बढ्छ । ग्लोबल आइएमईको ‘ओरियन्टेसन’मा बैंक अघि बढ्नेछ । हामीसँग आजसम्म चुक्ता पुँजी र रिजर्भसमेत गर्दा २४ अर्ब हाराहारीको पुँजी हुन्छ । यसर्थ, हामी एउटै परियोजनामा ६ अर्बसम्म लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छौँ ।
अझ जलविद्युत्को कुरा गर्ने हो भने त हामी १०–१२ अर्ब रुपैयाँसम्म एक्लैले लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छौँ । यो एउटा हाम्रो सामथ्र्य हुनेछ । तर, यो सामथ्र्यमा मात्रै हाम्रो ध्यान हुनेछैन, हाम्रो प्राथमिकता भनेको साना तथा मझौला व्यवसायमै बढी हुनेछ । अब हामीले ८ सय ३८ वटा ठाउँबाट हामीले सेवा दिन सक्नेछौँ । सरकारले तोकेका क्षेत्रहरू, उत्पादनमूलक क्षेत्र, विपन्न समुदाय, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि व्यवसाय गर्ने हाम्रो जोड हुनेछ । हामी सामथ्र्यअनुसार ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने त छँदै छौँ, हाम्रो मुख्य प्राथमिकताचाहिँ रिटेल बिजनेसमै हुनेछ ।
मर्जरपछिको ग्लोबल आइएमई बैंकले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई दिन सक्ने योगदानलाई तपाईं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो मर्जरले नेपाल सरकार र केन्द्र्रीय बैंकले लिएको नीतिलाई आत्मसात् गरेको छ । अन्य बैंकहरूलाई मर्जरमा जानका लागि एउटा उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेको छ । अब निश्चय नै नेटवर्क र पुँजीका हिसाबले ठूलो बैंक भएपछि हाम्रो सामर्थ्य पनि सोहीअनुसारको ठूलो हुने नै भयो, ठूलो सामथ्र्यले अर्थतन्त्रमा पनि राम्रै योगदान दिने हाम्रो विश्वास छ ।
सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानमा योगदान मिल्नेछ । छरिएर रहेको निक्षेपलाई एकीकृत गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर, रोजगारी सिर्जना गरेर, राजस्व तिरेर तथा औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढाउन सघाएर हामीले अर्थतन्त्रमा योगदान दिने नै छौँ । हामीले ग्लोबल आइएमई बैंकबाट पनि धेरै ठूलो योगदान दिँदै आएका छौँ । धेरै वर्षदेखि भारत, कोरियालगायत मुलुकबाट औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आउन सकेको थिएन ।
हामीले नै ती मुलुकबाट रेमिट्यान्स सेवा सुरु गर्‍यौँ । अहिले भारतबाट मासिक साढे २ अर्बभन्दा बढी भारतीय मुद्रा औपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिरहेको छ । कोरियाबाट समेत धेरै ठूलो रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट आइरहेको छ । यसमा हाम्रो योगदान धेरै ठूलो छ । मलाई लाग्छ, हरेक हिसाबले हामीले देश निर्माणका काममा सघाइरहेका छौँ, योगदान दिइरहेका छौँ ।
मर्जरपछि बैंकको नाम ग्लोबल आइएमई राख्न जनता बैंकको टिम तयार देखियो । सञ्चालक सातजना हुने, त्यसमा दुईजना जनताबाट हुने भयो । सिइओ जनताबाट राखिने भइयो । अध्यक्षका लागि उहाँहरूले नै मलाई प्रस्ताव गर्नुभयो । अनि स्वाप रेसियो जनताको १ सयबराबर ग्लोबल आइएमईको ८५ हुने भयो, र मर्जरमा सहमति जुट्यो ।
बैंकहरूले गाउँबाट निक्षेप संकलन गरेर सहरमा लगानी गर्ने गरेको आरोप छ, बैंकहरू गाउँ–गाउँ पुगेका छन्, तर त्यहाँ लगानी गरेका छैनन् भनिन्छ । यसमा तपाईंको अनुभव तथा मूल्यांकन के छ ?
तपाईंले सुनेको जस्तै आरोप मैले पनि सुनेको छु । बैंकहरूले गाउँ–गाउँबाट निक्षेप संकलन गरेर सहरमा लगानी गरेका छन् भन्ने आरोप लागिरहेको छ । म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यक्रममा जिल्ला–जिल्ला पुग्ने गरेको छु । धेरैले यस्तै गुनासो गर्छन् । तर, हाम्रो अनुभवमा त्यस्तो छैन ।
हामीले जुन ठाउँबाट निक्षेप संकलन गरेको हो, कम्तीमा त्यति नै रकम स्थानीयस्तरमै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति छ, सोहीअनुसार लगानी पनि भइरहेको छ । हामीले स–साना उद्यम–व्यवसायमा पनि बिमाका आधारमा विनाधितो कर्जा दिँदै आएका छौँ । अबको नीति पनि यस्तै हुनेछ । हामी जति ठूलो नेटवर्क बढाउँछौँ, जति गाउँ–गाउँमा हामी पुग्छौँ, त्यहाँको निक्षेप संकलन गरेर त्यहीँ कर्जा प्रवाह गर्दै रोजगारी र उत्पादन सिर्जना गराउनेछौँ ।
अहिले बिग मर्जरको चर्चा छ । ठूला बैंकहरू मर्जर भएर संख्या घटाउँदै जाँदा भविष्यमा एकाधिकार बढ्न सक्ने, बैंकहरू निश्चित व्यावसायिक समूहको हातमा जाने जोखिम पनि रहेको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
यस्ता व्यक्तिगत विचारहरू आउने गरेका छन्, मैले पनि सुनेको छु, तर यो तर्क ठीक होइन । ठूला अर्थतन्त्र भएका भारत तथा मलेसियाजस्ता मुलुकमा पनि बैंकको संख्या कम नै छन् । तर, त्यहाँ त्यस्ता खालका एकाधिकार (मोनोपोली) वा अरू कुरा केही देखिँदैन । मर्ज गराउने भए अनुमतिपत्र नै नदिएको भए हुन्थ्यो नि भन्ने तर्क पनि सुनिन्छन् । विगतमा के भए, त्यतातिर नजाऔँ । हाम्रो जनसंख्या, अर्थतन्त्रको आकारलगायत सबै हिसाबले वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउनैपर्नेछ । बिग मर्जर आवश्यक छ । कसैले तर्क गर्नकै लागि तर्क गरेका हुन्छन्, त्यसका पछाडि लाग्न हुँदैन, बिग मर्जर आवश्यक छ ।
बैंकको सञ्चालक पनि व्यवसायी पनि एकै व्यक्ति भएका कारण पनि यस्तो जोखिमको कुरा उठेको हुन सक्छ नि ?
नेपालमा बैंक र व्यवसायी छुट्याउने भन्ने कुरा पनि आएको छ । यो नीति ठीकै होला । तर, हामीले ५०औँ वर्षदेखि गर्दै आएको प्राक्टिस एकैपटक भत्काउन मिल्दैन । त्यसलाई क्रमशः नियमन गर्दै जाने हो । उदाहरणका लागि कोही व्यक्ति सञ्चालक पनि छ र उसले उद्यमीका रूपमा काम पनि गरिरहेको छ भने यसले अझ बढी योगदान दिएको हुन सक्छ । उसले रोजगारी सिर्जना गरेको छ, कर तिरेको छ, आर्थिक गतिविधि बढाउन त उसले निकै महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ नि ।
अझ उद्यमको ज्ञान भएको मान्छेले बैंकलाई समेत राम्रोसँग हाँक्न सक्छ । यद्यपि, त्यस्ता उद्यमीमा खराब आचरण भने हुनुहुँदैन । एकैपटक व्यवसायी र बैंकको सञ्चालक छुट्याउँछु भन्दा त्यो प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ । पहिला–पहिला आफैँ बैंक खोल्ने अनि आफैँ कर्जा लिने प्रवृत्ति पनि देखिएका थिए, तर अहिले त्यस्तो छैन । राष्ट्र बैंकले राम्रो नियमन गरेको छ । यस मामिलामा राष्ट्र बैंक यो दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै उत्कृष्ट नियामक निकाय लाग्छ ।
अन्तिममा, एकीकृत कारोबार सुरु गरेको अवसरमा नियामक निकाय, सञ्चालक, सेयरधनी र कर्मचारीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिला त ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकका सबै सञ्चालक, सेयर होल्डर तथा कर्मचारीलाई मर्जर सफल बनाएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु, यो उदाहरणीय सफलतामा हामी सबैले गौरव गर्नुपर्छ । मर्जरमा सहयोग गरेकोमा नियामक निकाय राष्ट्र बैंकलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु । अब हामीसँग चुनौती पनि छन्, केही कठिनाइ पनि आउनेछन्, यस्ता सबै अवस्थामा नियामक निकायदेखि सञ्चालक, कर्मचारी र सेयर होल्डरले उत्तिकै साथ–सहयोग दिनुपर्छ ।
अब शाखा समायोजनमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ, यसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा नियामक निकायले प्रोत्साहन दिनुपर्छ । सरकार र नियामक निकायको नीतिलाई हामीले अंगीकार गरेर अघि बढेका छौँ, सोहीअनुसार यसअघि घोषणा भएका प्रोत्साहनका साथमा थप प्रोत्साहन दिनुपर्छ, ताकि अन्य बैंकहरूलाई पनि मर्जरमा जान प्रेरणा मिलोस् । म सबै कर्मचारी साथीहरूलाई पनि उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्छु । हामीले एकताको भावना लिएर काम गर्न सक्यौँ भने छिट्टै सबै हिसाबले एक नम्बरको बैंक बन्न सक्छौँ ।
अहिले धेरै पुँजी, धेरै नेटवर्क र धेरै निक्षेप तथा पुँजी भएको बैंक बन्दै छौं, अब धेरै नाफा कमाउने र धेरै प्रतिफल दिने बैंक पनि बन्नुपर्छ । यसमा तल्लो तहका कर्मचारीदेखि व्यवस्थापक र सञ्चालकको उत्तिकै योगदान हुनुपर्छ । अब जनता र ग्लोबल मिलेर एउटा घर बनेको छ । हामी सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा सबै कर्मचारी एकै घरका परिवार हौँ । सबैले आफ्नो घरलाई बलियो बनाउनुपर्छ । हामी सबैले एकताको भावना लिएर अझ ऊर्जावान् भएर मिहिनेत गर्न सक्यौँ भने सबै हिसाबले ठूलो बैंक बन्न सक्छौँ । नयाँ पत्रिकाका
राष्ट्र बैंक मार्फत गरिने गुनासो अब अनलाइनबाटै